Ikhaya elimangalisayo eSölvesborg elinamagumbi okulala ayi-0
Le ndlwana ibekwe kwinkampu Camping Norje e Pukavisbucht. Kukho iilwandle ezintle kunye namathuba okuloba. Kufuphi nemitsalane emininzi yase Blekinge kunye ne Skåne inokufumaneka. Kwi-terrace unako ukugcoba kakuhle kwaye utye ngaphandle.
Imigama: indawo yokuhlala ekufutshane 10 m / ithuba lokuloba 300 m / ivenkile 150 m / indawo yokutyela 150 m / idolophu ekufutshane(Sölvesborg) 10 km / amanzi(Ulwandle/ulwandle olunesanti) 300 m